को रोना बढ्दै गएको अवस्थामा रोगसँग लड्ने क्षमताको विकास गर्नु नै उत्तम विकल्प ! यस्ता खानाले लिन सक्छ ज्या न ! – Online Saptarangi
October 19, 2020 Prakash WaibaLeaveaComment on को रोना बढ्दै गएको अवस्थामा रोगसँग लड्ने क्षमताको विकास गर्नु नै उत्तम विकल्प ! यस्ता खानाले लिन सक्छ ज्या न !
कोभिड–१९ (काे राेना भाइ रस) काे स ङ्क्रम णबाट जोगिन दैनिक गतिविधिमा सुधार गर्दै खानपिनमा ध्यान दिनुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन् । पछिल्लो समय स ङ्क्र म ण बढ्दै गएको अवस्थामा रोगसँग लड्ने क्षमताको विकास गर्नु नै उत्तम विकल्प भएको विज्ञहरुले बताएका छन् । त्यसका लागि दैनिक गतिविधि र खानपिनमा नै ध्यान दिनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन् ।
आयुर्वेदिक चिकित्सक डाक्टर ऋषिराम कोइरालाले खाने कुराहरुमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार तेलमा तारेर बनाइएको परिकारहरु कम खानुपर्ने छ । बजारमा पाइने चिल्लो, सुकिलो र सफा देखिने खाद्य वस्तुहरुमा बढी विषाक्त प्रयोग भएको हुन सक्ने भएकाले त्यस्ता वस्तुहरुको प्रयोग गर्दा ख्याल गर्नसमेत उहाँले सुझाव दिनुभएको छ । त्यस्तै ब्राेइलर कुखुराको मासु धेरै नखानसमेत उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ । ब्राेइलर कुखुरामा धेरै एन्टिबायोटिक प्रयोग भएको र जेनेटिक मोडिफाइडसमेत भएकाले बोइलर कुखुराको मासुको कम प्रयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
त्यस्तै खसीबोकाको उपभोग पनि कम गर्न उहाँको सुझाव छ कोकाकोला, फेन्टालगायतका पेय पदार्थको कम प्रयोग गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । दिनको एक दुई वटा कागतीको सेवन गर्ने, पुदिना, तिललगायतका वस्तुबाट बनाइएको अचार तथा चटनी खाने बानीले रोगव्याधी कम गराउने उहाँले बताउनुभयो ।
त्यस बाहेक नियमित व्यायाम गर्दा समेत शरीरमा फाइदा पुग्ने उहाँको भनाइ छ । योग, खानपिन, आयुर्वेदका जडीबुटी र मनोविज्ञानका पक्षहरुमा सबैभन्दा धेरै ध्यान दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । भाइरोलोजिस्ट डाक्टर बाबुराम मरासिनीले दशैँको बेला सहर बजारबाट आफ्नो घरमा जाँदा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने बताउनुभयो । दशैँमा घर नजानभन्दा पनि घर गएपछि